अर्थहीन विदेशी लगानी सम्मेलन - Karobar National Economic Daily
अर्थहीन विदेशी लगानी सम्मेलन
query_builderJanuary 2, 2017 7:45 AM supervisor_accountरत्न प्रजापति visibility687
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बेजटका उद्देश्यहरूमध्ये लगानी प्रवद्र्धनलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ, जसअनुसार ‘आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने’ भनिएको छ । बजेटको पाँचौं उद्देश्यका रूपमा ‘आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने र गरिबी घटाउने’ भनिएको छ ।
यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि पनि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । लगानी प्रवद्र्धन नभई आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार नहुने, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि नहुने, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि नभई आयआर्जनमा वृद्धि नहुने र आयआर्जनमा वृद्धि नभई गरिबी नघट्ने हुँदा लगानी प्रवद्र्धन अपरिहार्य नै देखिन्छ ।
यस अर्थमा बजेटका सात प्रमुख उद्देश्यमध्ये लगानी प्रवद्र्धनलाई चौथो प्राथमिकतामा राख्नु सराहनीय देखिन्छ । यद्यपि प्राथमिकतामा राख्नु नै ठूलो कुरोचाहिँ होइन, कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत्’ भन्ने आकर्षक नारा पनि तय गरिएको छ । आगामी वर्ष आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, तीन वर्षभित्र वर्षायाममा आत्मनिर्भर हुने र दस वर्षभित्र निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।
यी कार्यका लागि पनि ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्छ । साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले मात्रै यी उद्देश्य पूरा गर्न नसकिने हुँदा छिट्टै ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठूलै लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नु अपरिहार्य नै हुन्छ ।
यसका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार र नीतिगत व्यवस्थाहरूमा पनि समयानुकूल सुधार नगरी विदेशी लगानी आकर्षित हुने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले यी दुई पक्षको सुधारमा नै जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
हाजिर गरेबापत तलब बुझ्ने र काम गरेबापत घूस माग्ने बानी परेका कर्मचारीहरूको आचरण र अनुशासनमा व्यापक सुधार नल्याई मुलुकमा सुशासन कायम हुनै नसक्ने यथार्थलाई मनन गरेर राज्यले सुशासन कायम राख्न राज्यसंयन्त्रलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नीतिगत समस्याहरूले गर्दा लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको हुँदा त्यसलाई सुधार्नुपर्ने खाँचो पनि छ ।
नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने, व्यावसायिक लागतका सूचकहरूमा सुधार गरिने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल कानुन निर्माण, सुमधुर सम्बन्ध स्थापना, शान्तिपूर्ण वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिए पनि सोअनुरूपका कार्य समयमै हुन नसक्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी उद्योग विस्तार गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९, कम्पनी ऐन–२०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन–२०६३, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन–२०४२ संशोधन तथा नयाँ ऐन निर्माण गर्नेसम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिने भनिए तापनि संविधान संशोधन तथा कार्यान्वयन र प्रदेश सीमांकनलगायतका विषयमा संसद्मा विवाद र विरोधका मुद्दा उठिरहेकाले उपर्युक्त विषयहरूमा आवश्यक छलफलसमेत हुन नसकेको अवस्था छ ।
लामो समयदेखि लगानी बोर्डको बैठक नै बस्न नसक्दा ठूला आयोजनाहरूका लागि विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताहरूबाट आएको रु. ५ खर्ब ५६ अर्बको लगानी प्रस्ताव पनि अन्योलमा परेको अवस्था छ । उता लामो समयदेखि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा करिब रु. ३० अर्बको विदेशी लगानी स्वीकृत हुन नसकेको अवस्था पनि छ ।
अहिले पनि सरकारले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेको दाबी गरिरहे पनि लगानी प्रतिबद्धतामा भने खासै उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा कुल रु. ३ अर्ब ७५ करोडबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. ३ अर्ब ६४ करोडबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा वास्तविक विदेशी लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिएको छ, जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष कात्तिकसम्ममा कुल रु. १ अर्ब १२ करोडबराबरको वास्तविक विदेशी लगानी आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा कुल रु. ५ अर्ब ७१ करोडबराबरको वास्तविक विदेशी लगानी आएको देखिएको छ ।
यसरी चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा वास्तविक विदेशी लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ४ सय ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । गत वर्ष मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा विदेशी लगानी प्रभावित भएको थियो ।
तर, चालू आर्थिक वर्षमा त्यस्तो समस्या नहुँदा पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा सुधार आउन नसक्नुमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता यथावत् रहनुलाई मुख्य कारण मान्ने गरिएको छ । मुलुकमा अहिले फेरि प्रदेश सीमांकनको विषयले राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा देशैभरि पुनः राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएको छ ।
बन्द र विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । प्रदेश सीमांकनको विषय छिट्टै टुंगिने नदेखिएकाले राजनीतिक आन्दोलनले फेरि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । यो अवस्थामा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनको कार्य पनि स्वतः प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा पुरानो नीति उपयुक्त नभएको भन्दै ‘विदेशी लगानी नीति–२०७१’ कार्यान्वयनमा ल्याए पनि त्यसबाट पनि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन नसकेको स्पष्ट भएको छ । हरेक वर्ष लगानी प्रतिबद्धताअनुसार वास्तविक लगानी हुन नसक्नु झन् ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
ठूलो परिमाणमा लगानीको प्रतिबद्धता आए तापनि वास्तविक लगानी अत्यन्तै न्यून परिमाणमा हुँदै आएकाले नेपालको अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी प्रवद्र्धन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वास्तविक विदेशी लगानीको स्थिति निकै निराशाजनक रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा कुल रु. २० अर्ब ११ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा रु. ३ अर्ब १९ करोडमात्रै वास्तविक लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा कुल रु. ६७ अर्ब ३९ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा रु. ४ अर्ब ३८ करोडमात्रै वास्तविक लगानी भएको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पनि कुल रु. १५ अर्ब १४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि रु. ५ अर्ब ९२ करोडमात्रै वास्तविक लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यी आँकडा हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित नभएको र नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नै नभएको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
मुलुकमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पुनः अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख भएअनुसार सरकारले आगामी फागुन १९ र २० गते ‘नेपाल अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन’ गर्ने जनाइसकेको छ ।
यद्यपि स्मरणीय के छ भने जतिसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरे पनि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म लगानी प्रवद्र्धन हुनै सक्दैन । लगानीको अर्थ प्रतिफलको अपेक्षा पनि हो । त्यसैले लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता नभइकन स्वदेशी अथवा विदेशी कुनै पनि प्रकारको लगानी प्रवद्र्धन हुन सक्दैन ।
एकपछि अर्को राजनीतिक मुद्दालाई लिएर बन्द, हड्ताल र नियमित आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा सरकारले जतिसुकै गफ हाँके पनि लगानी प्रवद्र्धन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कुरा लगानी प्रवद्र्धनको गर्ने कामचाहिँ तिनै लगानीकर्तालाई दोहन र शोषण गर्ने प्रवृत्ति हट्न नसकेकाले लगानीका लागि जतिसुकै आकर्षक सम्भावना भए पनि लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।
पूर्ण रूपमा राजनीतिक स्थिरता कायम नभएसम्म र लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म लगानी प्रवद्र्धन हुन नसक्ने यथार्थलाई मनन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक लागिपरे मात्र नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक समृद्धि विदेशी लगानी सम्मेलन अर्थहीन